Unoti ‘Hungu Asi Panguva Imwe Chete Uchiti Aiwa’ Here? | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Funga muenzaniso uyu: Mumwe mukuru ari nhengo yeDare Rokukurukura Nezvipatara anoronga kubuda muushumiri neimwe hama yechiduku musi weSvondo mangwanani. Musi wacho paunosvika, mukuru wacho anofonerwa neimwe hama ine mudzimai achangobva kuita tsaona yemotokari ndokuendeswa kuchipatara. Hama yacho inokumbira mukuru wacho kuti amubatsire kutsvaka chiremba anobvuma kurapa asingashandisi ropa. Saka mukuru wacho anobva audza hama iya yechiduku kuti haachakwanisi kuenda kunoparidza nokuti anoda kunobatsira mhuri yawirwa nedambudziko.
Funga nezvemumwe muenzaniso: Vamwe amai vasina murume vane vana vaviri vanokokwa neimwe mhuri yomuungano mavo kuti vazouya kumba mamwe manheru. Vana vacho vanofara chaizvo amai vavo pavanovaudza nezvekukokwa kwavaitwa. Vanongoti dai zuva racho rasvika. Asi kwasara zuva rimwe kuti musi wacho usvike, mhuri iya inoudza amai vacho kuti pane zvangoerekana zvamuka uye hazvichaiti kuti vauye. Amai ava vanozoziva kuti nei mhuri yacho yataura kuti hazvichaiti. Zvakaitika ndezvokuti pashure pokunge mhuri yacho yakoka amai ava, yakakokwawo nedzimwe shamwari dzayo manheru mamwe chete ayainge yakoka amai ava.
Chokwadi, sevaKristu tinofanira kuita zvatinenge tavimbisa. Hatidi kuti shoko redu rive “hungu asi panguva imwe chete riri aiwa.” (2 VaK. 1:18) Zvisinei, sezviri mumienzaniso miviri iri pamusoro apa, mamiriro ezvinhu anosiyana. Dzimwe nguva hapana zvatinogona kuita kunze kwokurega zvatinenge tavimbisa. Pauro akambozviitawo.
PAURO AKAPIWA MHOSVA YOKUTI HAAITI ZVAANOVIMBISA
Muna 55 C.E., Pauro paaiva muEfeso ari parwendo rwake rwechitatu rwoumishinari, akaronga kuyambuka Gungwa reAegean kuti aende kuKorinde uye abva ikoko ozoenda kuMakedhoniya. Paakanga ava kudzoka kuJerusarema, akaronga kushanyira ungano yeKorinde kechipiri kuti anotora chipo chavo chomutsa chaifanira kunopiwa hama dzokuJerusarema. (1 VaK. 16:3) Tinoziva izvozvo nokuti pana 2 VaKorinde 1:15, 16 panoti: “Nechivimbo ichi, ndaimboda kuuya kwamuri, kuti muve nenguva yokufara kechipiri, uye pashure pokugara nemi kwenguva duku ndaizoenda kuMakedhoniya, ndozodzoka kwamuri ndichibva kuMakedhoniya mozondiperekedza zvishoma kuJudhiya.”
Zvinoita sokuti Pauro ainge audza hama dzokuKorinde nezveurongwa hwake mune imwe tsamba yaainge ambodzinyorera. (1 VaK. 5:9) Zvisinei, pasina nguva anyora tsamba iyoyo, Pauro akaudzwa nevanhu veimba yaKroe kuti muungano yacho maiva nokukakavadzana kwakanyanya. (1 VaK. 1:10, 11) Pauro akasarudza kuchinja zvaakanga aronga uye akanyora tsamba yatava kuziva sa1 VaKorinde. Mutsamba iyoyo, Pauro akavapa zano uye akavaruramisa. Akataurawo kuti ainge achinja mafambiro aaizoita achivaudza kuti aizotanga aenda kuMakedhoniya ozoenda kuKorinde.—1 VaK. 16:5, 6. *
Zvinoita sokuti hama dzokuKorinde padzakagamuchira tsamba yake, vamwe vaizviti ‘vaapostora vakanaka kwazvo’ vaiva muungano iyoyo vakamupomera mhosva yokuti haaiti zvaanovimbisa. Achiratidza kuti zvavaitaura handizvo, Pauro akabvunza kuti: “Naizvozvo, pandaida izvozvo, ndakazviona sezvinhu zvisina basa here? Kana kuti zvinhu zvandinoda kuita, ndinoda kuzviita maererano nenyama here, kuti nditi ‘Hungu, Hungu’ uye ‘Aiwa, Aiwa’?”—2 VaK. 1:17; 11:5.
Kuchinja kwakaita muapostora Pauro zvaainge aronga kwaireva here kuti akanga achiona nyaya yacho ‘sechinhu chisina basa’? Kwete! Shoko rakashandurwa kuti “zvinhu zvisina basa” rine pfungwa yokusaita zvaunenge wavimbisa zvichiratidza kuti hauna kuvimbika. Mubvunzo wakabvunzwa naPauro wokuti “zvandinoda kuita, ndinoda kuzviita maererano nenyama here?” unofanira kunge wakabatsira vaKristu vaiva muKorinde kuona kuti Pauro paakachinja zvaainge aronga, hakusi kuti aiva munhu asina kuvimbika.
Pauro akaramba zvakasimba zvaaipomerwa achiti: “Asi Mwari angavimbwa naye kuti shoko redu ratakataura kwamuri harisi Hungu asi panguva imwe chete riri Aiwa.” (2 VaK. 1:18) Chokwadi, Pauro paakachinja zvaainge aronga, aiva nechikonzero chaiva chakanakira hama nehanzvadzi dzokuKorinde. Pana 2 VaKorinde 1:23, panoratidza kuti paakachinja zvaainge aronga zvokuenda kuKorinde aida ‘kumbovarega.’ Chokwadi ainge avapa mukana wokuti vagadzirise zvinhu asati avaona chiso nechiso. Pauro paaiva kuMakedhoniya akaudzwa naTito kuti tsamba yake yakanga yaita kuti hama dzokuKorinde dzizvidembe uye dzipfidze, izvo zvakaita kuti afare chaizvo.—2 VaK. 6:11; 7:5-7.
“AMENI” KUNA MWARI
Pauro paakapomerwa kuti haaiti zvaanovimbisa, zvairevawo kuti basa rake rokuparidza raisagona kuvimbwa naro. Zvisinei, Pauro akayeuchidza hama dzokuKorinde kuti akanga avaparidzira nezvaJesu Kristu. Akati: “Mwanakomana waMwari, Kristu Jesu, uyo akaparidzwa pakati penyu nesu, kureva ini naSirivhano naTimoti, haana kuva Hungu naAiwa, asi Hungu akava Hungu kwaari.” (2 VaK. 1:19) Jesu Kristu, uyo aitevedzerwa naPauro, akanga asina kuvimbika here? Aiwa! Muupenyu hwake hwose nomuushumiri hwake, Jesu aitaura chokwadi nguva dzose. (Joh. 14:6; 18:37) Kana zvakaparidzwa naJesu zvakanga zviri zvechokwadi uye zvakavimbika, vanhu vaigonawo kuvimba nezvaiparidzwa naPauro nokuti zvaaiparidza zvainge zvakafanana nezvaJesu.
Jehovha ndi“Mwari wechokwadi.” (Pis. 31:5) Tinoona izvozvo pane zvakazonyorwa naPauro kuti: “Zvisinei nokuti zvipikirwa zvaMwari zvizhinji sei, izvo zvakava Hungu pachishandiswa iye,” kureva kuti pachishandiswa Kristu. Jesu akaramba akatendeka paaiva pasi pano uye izvozvo zvinoita kuti tive nechivimbo chokuti zvipikirwa zvaJehovha zvakavimbika. Pauro akaenderera achiti: “Naizvozvowo pachishandiswa iye [Jesu] zvinonzi ‘Ameni’ kuna Mwari kuti akudzwe nokwatiri.” (2 VaK. 1:20) Zvinorevei kuti Jesu ndi“Ameni”? Zvinoreva kuti ndiye anoita kuti tive nechivimbo chokuti zvose zvakataurwa naJehovha Mwari zvichazadziswa.
Sezvinongoita Jehovha naJesu vanotaura chokwadi nguva dzose, Pauro aitaurawo chokwadi. (2 VaK. 1:19) Aiita zvaaivimbisa, uye akanga asingaiti zvinhu “maererano nenyama.” (2 VaK. 1:17) Asi ‘aifamba maererano nomudzimu.’ (VaG. 5:16) Aiita zvinhu zvakanakira hama dzake. Hungu wake aiva Hungu!
HUNGU WAKO NDIHUNGU HERE?
Mazuva ano vanhu vakawanda vanowanzorega kuita zvavanenge vavimbisa kana vakasangana nechinhu chidiki kana kuti pakamuka zvavanonyanya kufarira. Munyaya dzebhizimisi, vanhu vanoti “hungu” asi kazhinji asiri “hungu,” kunyange zvazvo vabvumirana vachiita zvokunyorerana pasi. Vakawanda havachaoni muchato sechibvumirano chavanofanira kuchengeta kwoupenyu hwose. Kuwedzera kuri kuita vanhu vari kurambana kunoratidza kuti vakawanda vanoona muchato sechibvumirano chokutamba nacho, chiri nyore kuputsa.—2 Tim. 3:1, 2.
Ko iwe? Hungu wako ndiHungu here? Ichokwadi kuti sezvataurwa kwatangira nyaya ino, dzimwe nguva ungatadza kuita zvaunenge wavimbisa kwete nokuti hauna kuvimbika asi nepamusana pezvinenge zvaitika zvausingakwanisi kudzivisa. Asi somuKristu, kana ukavimbisa kuita chimwe chinhu, chokwadi unofanira kuita zvose zvaunogona kuti uzadzise vimbiso iyoyo. (Pis. 15:4; Mat. 5:37) Kana ukadaro uchazivikanwa semunhu akavimbika, anoita zvaanotaura uye anoramba achitaura chokwadi. (VaEf. 4:15, 25; Jak. 5:12) Kana vanhu vakaziva kuti wakavimbika pane zvaunoita zuva nezuva, vangada kuteerera paunovaudza chokwadi choUmambo hwaMwari. Saka, ngativei nechokwadi chokuti Hungu wedu ndiHungu!
^ ndima 7 Pasina nguva anyora 1 VaKorinde, Pauro akazoenda kuMakedhoniya sezvaainge ataura achipfuura nomuTroasi uye kuMakedhoniya ikoko ndiko kwaakanyorera 2 VaKorinde. (2 VaK. 2:12; 7:5) Akazoendawo kuKorinde.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Unoti ‘Hungu Asi Panguva Imwe Chete Uchiti Aiwa’ Here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA March 2014